एक्सएनक्स प्याक रूडर एनीमेशन
प्रश्न एक्सएनक्स प्याक रूडर एनीमेशन
7 महिना6दिन पहिले #1290 by Dietmar
मैले तपाइँको एक्क्सम्युक्स यस लिंकबाट स्थापित गरेको छु। www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/6/890 , जुन जस्तो देखिन्छ
Rikoooo DLL सेक्शन मा यस मोडेल को नवीनतम संस्करण। उत्कृष्ट बाह्य मोडेल, तथापि चक्कर एनिमेसन देखिन्छ
मोडेलमा समावेश हुन सक्दैन। मैले डबललाई मोडल कनवर्टर उपकरणको साथ देखेको छु जसले सबैलाई देखाउँछ
एक मोडेल को लागि एनीमेशन, र छड को लागि कुनै एनीमेशन छैन। त्यो निश्चित हुनेछ?
A2 मा आधारित 321D प्यानलको सन्दर्भमा अतिरिक्त टिप्पणीको रूपमा। मलाई लाग्छ यो यो उत्कृष्ट मोडेलको लागि समाधानको रूपमा देख्न सक्दैन।
एक F18 HUD प्रदर्शन पनि एयरबस प्यानलमा फिट छैन। त्यहाँ गैर सेनाको लागि उपलब्ध फ्रीवेयर HUDs छन्
मोडेलहरू A350 2D प्यानलमा अझ बढि उपयुक्त हुनेछ। यद्यपि, यो एक प्रस्ताव हो।
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: क्याक्टस 1123
7 महिना4दिन पहिले #1292 by Dietmar
के म यस समस्याको अनुभव गर्ने मात्र हो? कम से कम Rikoooo को जवाब दिनुहोस किनकी DLL वेब साइड मा यो भन्यो
कि चौंरी सहित सबै भाग एनिमेटेड छन्। यसको अतिरिक्त, यदि म CONTACT बटन मा क्लिक गर्छन म यो एमएसजी प्राप्त गर्छु:
त्यसोभए, म मोडेलको विकासकर्तालाई कसरी सम्पर्क प्राप्त गर्दछु ?? मैले कुनै मेल सम्पर्क फेला पारेन। के मैले चीजहरूको निरीक्षण गरे?
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.668 सेकेन्ड